Kingsley Coman Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị egwuregwu bọọlụ France Kingsley Coman Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara amara aha; "Ụgha Ụgha". Ụmụaka ndị Ezeley anyị na-akọ akụkọ ya na akụkọ na-adịghị mma akụkọ eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ ndị na-amaghị ihe banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ike ya ngwa ngwa mana ole na ole tụlere Kingley Coman's Bio nke bụ ihe na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Kingsley Coman Child Story Plus Na-enweghị isi akụkọ akụkọ Eziokwu -Mmalite Ndụ & Nkwa
A mụrụ Kingsley Coman na 13th ụbọchị June 1996 na ngalaba Seine-et-Marne, Paris, France. A mụrụ ya na French French na nna ya, Christian Coman nke na-esi na Guadeloupe, bụ nke sitere na ya Thierry Henry, Claude Makelele, Lilian Thuram na Frank Leboeuf. Kingsley bụ onye na-akwado ya Thierry Henry onye talent ya kpaliri ya ịkwado football dị ka nwatakịrị.
Kingsley malitere ọrụ ntorobịa ya mgbe ọ dị afọ isii, na-abanye US Senén-Moissy na 2002 tupu ya abanye na Paris Saint-Germain na 2004.
Ka nna ya na-etinye ya, "Kingsley bụ nwatakịrị na-eti mkpu mgbe egwuregwu ọ bụla furu efu ma ọ bụ asọmpi. Ana m echeta mgbakọ n'egwuregwu football na Lille. Ndị agha ya weere ihe mgbaru ọsọ na semifinals na nke a dugara 1-0. Ozugbo ahụ, ọ malitere ịkwa ákwá. Little Kingsley weere bọl ahụ n'ihe mgbaru ọsọ ya, mee ka ọ lọta na isi okwu nke ịkwado onwe ya ma malite kickoff. Onye otu ibe ya weghaara ya bọmbụ ahụ ma 'Eze' dribedere ndị otu na-emegide ya niile ka ha wee nwee ike ime ka ha dị. Nke a bụ afọ mbụ ọ dị na PSG. Taa, ịkwa ákwá abụghị ikpe. Mgbe ọ na-efunahụ otu egwuregwu dị mkpa, enyi ya nwanyị na nwunye ya na-ekwu na ya anaghị agwa onye ọ bụla okwu ma ọ dịkarịa ala otu ụbọchị. "
Kingsley tolitere PSG dị ka onye na-eto eto PSG na-eto eto. Mgbe ọ dị afọ 10, ọ na-egwuri egwu n'okpuru ndị 14 n'ihi ike ya. Kingsley na-eletụ anya ntakịrị mgbe ọ na-eto eto na PSG.
Coman mere ọkachamara ọkachamara maka PSG na 17 February 2013. Ọdịdị ahụ mere ka ọ bụrụ onye kacha nta na PSG n'akụkọ ihe mere eme na 16 afọ, ọnwa asatọ na ụbọchị anọ. Coman kwagara na Juventus na 2014 na njedebe nke nkwekọrịta ya, na-emeri Serie A na Coppa Italia n'oge mbụ ya na Ịtali. N'August 2015, ọ na-ebufe ya na Bayern Munich, na-emeri mmadụ abụọ ọzọ n'oge mbụ ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Kingsley Coman Child Story Plus Na-enweghị isi akụkọ akụkọ Eziokwu -Ndụ mmekọrịta
Enwere okwu na; "Ndị ezigbo mmadụ anaghị ahụ ụmụ agbọghọ mara mma, ha hụrụ nwa agbọghọ ahụ n'anya, bụ onye nwere ike ime ka ụwa ha mara mma." Maka Coman, ya na onye mara mma na-eme ka ụwa ya maa mma. Ihe nlereanya French bụ Sephora Goignan nwere nwa maka ya.
Ndị na-eto eto ya bụ ndị mara mma Seignra Goignan maara maka enyemaka ya na-adịghị na ya maka nwoke dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru ebe a. Ọ na-ele anya nke ọma na ndị mmụọ ozi ma nwee ike ime ka mmadụ nwee ọtụtụ butterflies na afo.
Sephora Goignan nwere oke ọrụ na ọ na-ewe oge ya iji rụọ ọrụ nke Kinsley nke pụtara ụwa nye ya.
N'agbanyeghị ịhụnanya, ọtụtụ ndị jụrụ ihe kpatara Coman ka na-enweghi ike ịchọta ụdị nwanyị ọ nwere. Gwa eziokwu. Njikọ ha weere na June 2017 mgbe Kingsley wakporo ya. Anyị ga-enye gị nsogbu.
Tupu mgbe ahụ, Kingsley na-akwụ ego £ 4,390 maka mwakpo ahụ na Sephora Goignan nke mere ka ọ ghara ịrụ ọrụ ruo ụbọchị asatọ. Mgbe a jụrụ ya ajụjụ ọnụ, ọ sịrị na iwe were ya mgbe onye ya na ya na-emebu tinye foto na akaụntụ Instagram ya n'enweghị ikike. Kama ịga ọzụzụ, ọ nọrọ izu na ụlọikpe ndị France mgbe o kwusịrị ikpe maka ime ihe ike n'ụlọ. Onye na-achọ ịlụ ahụ nakweere ebubo ahụ ma jụ ịme nkwupụta na-esochi anya ụlọikpe ya. Mgbe e mesịrị, Bayern Munich nwetara ahụhụ site n'aka Bayern Munich maka mwakpo ahụ o mechara kwaa mmakwaara.
Kingsley Coman Child Story Plus Na-enweghị isi akụkọ akụkọ Eziokwu -Eziokwu nke Onye
Kingsley Coman nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike Ezeley Coman: Nke a na-emeli, ike ịmụta ngwa ngwa ma gbanwee echiche. Kingsley Coman bụ aha dịka ọsọ ọsọ dị ka a hụrụ n'okpuru ebe a.
Mmezi Ezeley Coman: Mgbe ụfọdụ ọ na-atụ ụjọ nke nwere ike iduga ime ihe ike n'ụlọ. N'ikwu nke a, o nwere ike ịbụ onye na-ekwekọghị ekwekọ ma nwee obi abụọ.
Ihe Kingsley Coman nwere mmasị: Ime obere njem na obodo, na-egwu egwu, na-agụ ụdị magazin niile, ma na-akparịta ụka naanị site na ndị enyi.
Gịnị Kingsley Coman na-enweghị mmasị: N'ịbụ onye naanị ya, ịbụ onye a na-ejigide, ịmeghachi ihe ọrụ ọzụzụ dị iche iche na oge.
Na nchịkọta, Coman na-anọchi anya mmadụ abụọ dị iche iche nke ị ga-amataghi nke ị ga-eche ihu. O nwere ike ime omume ọma, nkwurịta okwu na njikere maka ntụrụndụ. Coman nwere ike na mberede na-esi ike n'oge ụfọdụ ị na-atụghị anya. Ọtụtụ ndị ekwuola na enyi ya bụ Renato Sanchez ghọtara ya.
Kingsley Coman Child Story Plus Na-enweghị isi akụkọ akụkọ Eziokwu -Ntutu Ntutu
Kingsley Coman nwere ezigbo abalị - ma n'ọhịa ma n'isi ya. Ihe nkiri ahụ malitere mgbe onye France nọ na-eme ihe maka ndị Bundesliga gọọmenti na Champions League nke ikpeazụ na nke ikpeazụ na Atletico Madrid, ya na Athletico meriri ekele maka mmejọ ya.
Ma ma e wezụga ihe mgbaru ọsọ ahụ dị egwu megidere ìgwè ya, otu ihe ọzọ jidere anya nke ndị na-ekiri egwuregwu ahụ n'ụlọ: Ọ bụ isi ọchị ọchị nke Coman dị n'okpuru ebe a.
N'ụzọ dị mkpa, dịka ị pụrụ ịhụ site na oyiyi ahụ dị n'elu, Coman kpebiri igwu egwu n'ihu ọtụtụ puku ndị nkiri na ọtụtụ nde ndị na-ekiri ya na-egosi oke ntutu isi n'akụkụ ya. Mgbe egwuregwu ahụ nwụsịrị, ndị uwe ojii were iwe ha na ntutu isi ya. A na-ahụ ihe atụ nke tweets n'okpuru.
N'ụzọ doro anya, dị ka ị nwere ike iche n'echiche, ụmụ nwanyị na-adị ngwa ịchọta ntutu isi ma bụrụ ndị na-enweghị mgbaghara na-ata ụta n'ihi ọnwụ ha. N'agbanyeghị ọgụ niile na ntutu isi ya, Kingsley enweghi okwu ọ bụla na onye isi ya. Isi ntutu ka dị ka n'oge ederede.
Kingsley Coman Child Story Plus Na-enweghị isi akụkọ akụkọ Eziokwu --adịghị atụ ụjọ
Coman abụghị ihere iji kwupụta echiche ya. Na ịkọ oge ya na-egwu n'akụkụ Zlatan Ibrahimovic na PSG, Coman kwuru banyere Swede: "Mmekọrịta mụ na Ibrahimovic anọpụghị kpamkpam. Ọ bụghị ụdị onye ọkpụkpọ na-agakwuru ndị na-eto eto ma nye ha ndụmọdụ. Nanị ihe ọ na-eche bụ banyere onwe ya. "
Otú ọ dị, Coman nwere otuto dị elu karịa Pep Guardiola: "Ọ bụ onye nchịkwa kasị mma n'ụwa, n'echiche m. Enwere m nke ọma n'okpuru Pep, M ga a ọtụtụ nke egwuregwu eme ihe, o gosipụtakwala nnukwu okwukwe na m. "
Kingsley Coman Child Story Plus Na-enweghị isi akụkọ akụkọ Eziokwu -Costa Partnership
Coman na Douglas Costa jikọtara ya na nnukwu mmetụta ebe ha zutere FC Bayern Munich. Na mmerụ ka Arjen Robben na Franck Ribery ịgọnahụ Allianz Arena kwesịrị ntụkwasị obi ịhụ 'ohi' n'ụgbọ elu, ọrụ nke Costa na Coman na nku ha hụrụ ngwa ngwa Bayern Fans dub ha duo 'The CoCo Analysis'.
Kingsley Coman Child Story Plus Na-enweghị isi akụkọ akụkọ Eziokwu -Egwuregwu Football
A na-ewerekarị ya dị ka otu n'ime ndị na-eto eto na-eto eto nke ọgbọ ya, Coman bụ ọkachamara ngwa ngwa, nkà na nkà na ụzụ, na-eji nkà dribbling ọma, ọhụụ, ọsọ ọsọ na ọbụna ọganihu. Kingsley nwere ike igwuri egwu ma ọ bụ ọbụna n'etiti, dị ka ma ọ bụ onye na-eme ihe ike ma ọ bụ dịka onye na-eti egwu.
Ọbụna gị onwe gị bụ ụkwụ aka nri, ọnọdụ ya kachasị dị n'aka ekpe, nke na-enye ya ohere iti ndị iro ya n'otu n'otu ọnọdụ, bee ya n'etiti etiti ụkwụ aka nri ya, ma gbaa ihe mgbaru ọsọ, mee ka o nwee ohere maka ndị otu, maọbụ mee ka agha dakwasị ebe ahụ. Na afọ 2015, Don Balón akpọ Coman otu n'ime ndị na-eto eto kacha mma 101 n'ụwa
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Ezeleyley anyị. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Bafetimbi Gomis Childhood Story Plus Ihe omuma ihe omuma
Aymeric Laporte Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma